Froala: Ku kobci madashaada barnaamijka 'WYSIWYG' oo ah Tifatiraha Qoraalka hodanka ah oo Muuqaal buuxa ah | Martech Zone
Jimco, Febraayo 19, 2021 Jimco, Febraayo 19, 2021 Douglas Karr
Haddii aad waligaa bilawday wadada horumarinta madal aad u baahan tahay tifaftire qoraal ah oo ah waxa-aad-aragto-waa-waxa aad helayso (WYSISYG), waad ogtahay sida ay dhib u noqon karto. Markii aan ka shaqeynayay adeeg bixiyaha emaylka, shaqadii horumarinta iyo tijaabinta tifaftiraha ka shaqeeyay jawaabta, email-ka macaamilka ee macaamiisha HTML ayaa soosaarayaasha u soo saaray dhowr sii dayn ah si ay u saxaan oo u saxaan. Ma sahlana.
Tifatiraha qoraalka waa mid ka mid ah walxaha aad jeclaan lahayd inaad ku dhex gasho barxad si weyn u xoojineysa waxyaabaha la qabtay, laakiin maahan inay u baahan tahay bilo ama sannado horumarineed. Tifatiraha Froala waa tifaftire qoraal dhaqso badan oo hodan ah oo fudud, qaab-dhismeed wanaagsan, aamin ah, oo u fudud kooxdaada horumarinta inay dhexgalaan dhammaan qaabdhismeedka caanka ah.
Tilmaamaha Naqshadeynta Froala Tifatiraha
Naqshad Casri ah - interface wanaagsan oo casri ah oo dadka isticmaala ay jeclaan doonaan oo keliya.
Retina Diyaar - Faahfaahin dheeraad ah, qurxinta wanaagsan iyo qaabab fiiqan.
Dulucda - Adeegso asalka ama mawduuca mugdiga ah, ama abuur mawduuc kuu gaar ah adoo adeegsanaya faylka mawduuca LESS.
Interface Intuitive - Tifatiraha qoraalka hodanka ah ee Froala wuxuu bixiyaa shaqeyn dhammaystiran iyada oo loo marayo interface aad u macquul ah oo dadka isticmaala ay u heli doonaan dabiici ah inay isticmaalaan.
popups - popups cusub, oo qaabeysan oo khibrad adeegsade laga cabsado.
Calaamadaha SVG - astaamaha SVG ee gudaha lagu sameeyo, astaamaha vectorial-ka ee la qaadi karo oo u muuqda qurux heer kasta oo ay yihiin.
Nooca Caadiga ah - Tifatiraha WYSIWYG HTML waa midka kaliya ee leh qalab khaas ah oo gaar ah oo bedelaya muuqaalka oo dareemaya sida aad rabto.
Qalabka Qalabka - Badhano aad u tiro badan? Laga yaabee inaysan ku jirin nidaamka saxda ah? Adiga ayaa si buuxda gacanta ugu haya shaqeynta toolbar tifaftiraha shaashad kasta.
Habeen Dhamaan Jidka - Wax walba waa la habeyn karaa ama la sameyn karaa: badhannada, hoos u dhaca, popups, icons, toobiye.
Qalab ku dheggan - Si loo fududeeyo khibradaada tafatirka toolbar-ka tifaftiraha WYSIWYG wuxuu kusii nagaan doonaa shaashadda dusheeda inta aad hoos u socoto.
Qalab Qalabaynta - Tilmaamaha tifaftiraha qoraalka hodanka ah uma baahna inuu isku soo koobo cinwaanka boggaaga, kaliya u deji cabir ahaan.
Tusaha Astaamaha - Si fudud u beddel barta toolbar tifaftiraha WYSIWYG HTML booska kore kor ilaa hoos, iyadoo sidoo kale la adeegsanayo aaladda toolbar ee dhegta leh ama isweydaarsiga
Shaashad oo idil - Wax ka qabashada qaddarro badan oo ka kooban waxay u baahan tahay meel ballaaran oo wax lagu beddelo. Badhanka shaashadda buuxa wuxuu ku fidin doonaa aagga wax ka beddelka bogga oo dhan.
Bog buuxa - Qoridda iyo tafatirka bogga HTML oo dhan sidoo kale waa suuragal. Waxtar u leh emayllada, laakiin maahan oo keliya, isticmaalka HTML, MADAXA, JOOJINTA calaamadaha iyo caddeynta DOCTYPE waa la oggol yahay.
Iframe - Tifaftiraha WYSIWYG HTML waxyaabaha uu ka kooban yahay ayaa laga sooci karaa bogga intiisa kale iyadoo la adeegsanayo iframe sidaa darteed ma jiraan qaabab ama qoraallo isku dhaca.
Tilmaamaha Waxqabadka Tifatiraha Froala
Fast - Lix jeer ka dhakhso badan bilig biligta, tifaftiraha qoraalka hodanka ahi wuxuu ku bilaabi doonaa wax ka yar 40ms.
khafiif - Iyada oo udub dhexaad u ah oo kaliya 50KB, waxaad ku soo qaadan kartaa khibrad tafatir la yaab leh barnaamijkaaga adigoon lumin xawaaraha xamuulka.
Plugin ku saleysan - Qaab dhismeedka qaabdhismeedka wuxuu ka dhigayaa tifaftiraha WYSIWYG HTML mid waxtar badan, si sahlan loo fahmi karo, loo dheereyn karo loona ilaalin karo.
Tifaftirayaal fara badan oo Bog ah - Hal ama toban tifaftire qoraal isku bogga ah? Ma dareemi doontid farqi, kaliya u deji inay bilaabaan guji.
HTML 5 - Tifatiraha Froala Rich Text waxaa loo dhisay xushmeynta iyo ka faa'iideysiga heerarka HTML 5.
CSS 3 - Waa maxay habka ugu wanaagsan ee lagu horumarin karo khibrada isticmaale marka loo eego isticmaalka CSS 3? Saamaynta khiyaanada leh ayaa tifaftiraha ka sii dhigaysa.
Tifatiraha Froala Tilmaamaha Moobilka
Android iyo macruufka - Qalabka Android iyo IOS ayaa la tijaabiyey lana taageeray.
Dib-u-dhigga Sawirka - Tifatiraha Froala Rich Text waa tifaftiraha kowaad ee WYSIWYG HTML oo leh cabir muuqaal leh oo ka shaqeeya xitaa aaladaha mobilada.
Muuqaalka Video - kii ugu horreeyay ee soo kordhiya cabbirka fiidiyowga xitaa markay ciyaarayaan. Dabcan, waxay ku shaqeysaa moobiilka sidoo kale.
Design Tixgelinta - Mawduucyada aad tafatirka ka bixinayso ayaa jawaabi doona. Tifatirahooda WYSIWYG HTML wuxuu xamili karaa sawirka cabirkiisa isagoo adeegsanaya boqolleyda.
Qalabka ku shaqeeya cabbirka shaashadda - Markii ugu horraysay tifaftiraha qoraalka hodanka ah, bar-tilmaameedka waa loo habeyn karaa cabir shaashad kasta.
Tifatiraha Froala Tifatiraha SEO
Nadiifi HTML - Froala waxay soo saartay algorithm si otomaatig ah u nadiifisa soosaarka HTML ee tifaftiraha qoraalka hodanka ah. Qor walaac la'aan, tifaftiraha WYSIWYG HTML wuxuu soo saaraa soosaar aad u nadiif ah, oo sugaya inuu ku gurguuro makiinadaha raadinta.
Sawirka Alt Tag Support - Beddelka sawirka waa qoraalka la muujiyay haddii biraawsarku uusan soo bandhigi karin sawirka. Sidoo kale waa qoraalka ay adeegsadaan matoorada raadinta, ee ha iska indha tirin. Qoraal kale ayaa lagu dejin karaa soo-saarista sawirka tafatirka.
Link Cinwaanka Taageerada - In kasta oo cinwaanka iskuxirka aan la ogeyn inuu leeyahay saameyn weyn oo SEO ah, wuxuu ka caawiyaa dadka isticmaala inay si fudud ugu dhex maraan boggaaga. Maaha sidaas muhiim, laakiin way fiicantahay in la helo. Calan cinwaanka iskuxiraha arbushinta xiriirka.
Tilmaamaha Amniga Froala Tifatiraha
Froala WYSIWYG HTML Tafatiraha wuxuu leeyahay hanaan difaac oo adag oo ka dhan ah weerarada XSS. Xaaladaha badankood, uma baahnid inaad wax walwal ah ka qabtid arrintan, laakiin waxaan weli kugula talineynaa inaad baaritaanno dheeri ah ku sameyso server-kaaga.
Waxa weheliya taageerid dhammaan muuqaalada HTML, tifaftiraha waxaa loo tarjumay 34 luqadood oo kala duwan, wuxuu leeyahay taageero RTL oo leh otomaatiga, iyo Spell Check.
Froala xitaa waxay leedahay a WordPress plugin si aad u dhexgaliso tifaftiraha bartaada WordPress.
Iskuday Froala's HTML HTML Tafatiraha Soodejiso Froala
Tags: editortafatiraha dhakhsaha badantifaftiraha htmlTifatiraha qoraalkaeditor qoraalkatifaftiraha wordpresswysiwygtifaftiraha wysiwyg
Sida Loogu Aqoonsado Fursadaha SEO-ga ee Boggaaga Si Loogu Hormariyo Darajada Natiijooyinka Raadinta Adoo Isticmaalaya Xeebaha
accessiBe: Adeegsiga Sirdoonka Artifishalka ah Si Wax looga Qabto Gaaritaanka Goobta